नतालिया Mikhailova, skater र बस सुन्दर
सौन्दर्य-केटी नतालिया Mikhailova, खेलकुद जटिल "ओलम्पिक" मा नृत्य मा लगे, मास्को मा 1986 मा जन्मिएको हो। त्यो, माथि पुग्न चाहन्थे सबै पेशेवर खेलाडीहरूलाई जस्तै। तिनीहरूले छन् तथापि, आज्ञा पालन गर्न गाह्रो। Arkadi Sergeev - उनको कोच नतालिया Rumyantsev (1999-2005), र साझेदार थियो। स्केट्स जीवनको अर्थ भयो। उनको साझेदार संग, त्यो एक दशक रोल्ड। उहाँले सातौं भयो जहाँ फ्रान्स, मा प्रतिस्पर्धा को आरोप मा गिरावट भएकालाई रूस मा जुनियर च्याम्पियनशिप मा 10 ठाउँमा पछि। तर होनहार को एक जोडी। त्यसै वर्ष मा तिनीहरूले जुनियर प्रतियोगिता मा दुई पटक भाग। निम्न मौसम, जापान, नागानो तिनीहरूले माथिको दुई कदम चढ्नु गर्न सक्षम छन्। तिनीहरूले सातौं स्वर्गमा छन्। यो नृत्य गर्न बरफ मा शीर्ष पटक "बन्द लिन" गर्न सक्नुहुन्छ। तिनीहरूले बिस्तारै accustomed प्राप्त गरिन्छ, न्यायाधीश सिक्न। पूर्ण भरोसा लगातार उच्च अंक सेट गर्न सुरु गरेपछि यो केवल थियो। 2002 देखि, परिणाम राम्रो, वहाँ पहिलो स्थानमा छन्। यस समयमा, यो Sergeyev संग अझै पनि खडा छ। तर त्यसपछि उहाँले घाइते र पीडादायी डाउनटाइम सुरु गर्न बाध्य हुन्छ। परिवर्तन साझेदार, र त्यसपछि यो Sergeyev फर्काउँछ। जोडी असमान खडा। पहिलो र चौथो स्थानहरू पर्ची र पाँचौं स्थानहरू बीच। स्केटिङ, आंकडा स्केटिङ, चुपचाप जीवनको बीस वर्ष लाग्यो।
के तपाईं skater आंकडा गर्न चाहनुहुन्छ?
तर यो गर्दैन भेला खेल। पहिले नै शान्त पारिवारिक जीवन, प्रेम, सद्भाव, बच्चाहरु चाहन्छु। यहाँ नतालिया Mikhailova पूरा Aleksandra Zhulina। हँसिलो, ऊर्जावान, त्यो उनको नृत्य, तिनीहरूले क्यानाडा र संयुक्त राज्य अमेरिका मा प्रदर्शन जो संग तयार छ। तर यहाँ, परिणाम कम 8 र 10 सिट छन्। निम्न सिजन (2008-2009 वर्ष) मा कप को रूस मा पर्म र कजान, यो छ दोस्रो चरण को पोडियम र लगभग तुरुन्त मा च्याम्पियनशिप को रूस - छैटौं ठाउँ। यस Natalya Mikhailova अन्त राख्न निर्णय गर्छ। स्केटिङ, आंकडा स्केटिङ, उनको जीवन मा एक लामो समय लिए: धेरै 20 वर्ष। त्यो छोटकरीमा skated कोसँग उनको साझेदार, एन्ड्रयू Maximishin कडुवाहट एक कोच Zhulin लागि तिनीहरूले एक जोडी "पारित" थिए, कि र सबैभन्दा नतालिया उहाँको व्यक्तिगत जीवन व्यवस्था गर्न चाहन्थे उल्लेख गरे। को कोच लागि यो "आइस आयु" मा टेलिभिजनमा काम गर्न मजा थियो र प्रशिक्षण मा उहाँले बिहान र 11 बजे छैन आए। त्यहाँ घर्षण, र धेरै गम्भीर, साझेदार र साझेदार र कोच बीच। जवान नयाँ वस्तुहरू विकास, पूर्ण क्षमता मा काम गर्न चाहन्थे। एक Zhulin र Mikhailov स्थिर देखिन्थ्यो। माथि रोल छैन - र नतालिया यो सिर्फ गर्नुपर्छ भन्छन्।
नतालिया Mikhailova, धेरै देखावटी उपस्थिति संग एक केटी, बस आफ्नो कोच संग प्रेम गरे। त्यो मात्र बीस-दुई वर्ष थियो, र Zhulin - वयस्क। उहाँले एक परिवार छ, तर पनि बलियो छैन। र यसलाई खोल्छ को सांसारिक पार्टीहरूलाई एक जवान सौन्दर्य प्रवेश। साथै, उहाँले Lovelace स्वीकार। सुन्दर जवान गम्भीर आफ्नो नृत्य साझेदार आदी, उहाँले विवाह भएको थियो र माया जुङ्गा र तातियाना Navka। पछिल्लो विवाह सिद्ध देखिन्थ्यो। तर आदर्श - सधैं बस सपना। र यो विवाह tottering छ। त्यहाँ कुरा छ , Navka र Basharova त्यहाँ Rulin र Mikhailova को कुरा हो। र Zhulin Tatyanoy Navkoy यसलाई diverges कि घोषणा।
नतालिया Mikhailova उनको प्रेमी संग एक नागरिक विवाह बस्थे। त्यो पहिले एक कठिन समय थियो। त्यो सबै मित्र र प्रेमिकाहरुलाई, आफ्नो कोच संग पूरा लुकेको। र आफ्नो सम्बन्ध छैन रूपमा विश्वसनीय छ। बस Zhulin तिनीहरूले सँगै जीवन बिताउन सक्नुहुन्छ बताए। सबै छ। यस आशावादी आशा पर्याप्त, भन्ने तपाईं तर्फ देखि हेर्न भने लागि।
Natalya Yurevna Mihaylova - एक वयस्क र त्यो बस प्रतीक्षा गर्न सक्ने विश्वास गर्दछन्। त्यो उदाहरणका लागि, फोन सञ्चालन गर्न सक्दैन, रिसोर्टमा हो, र सबै संचार Zhulin मार्फत गरिन्छ त्यो उहाँलाई आफ्नो पूर्ण भरोसा जोड भन्दा: यो छैन र साशा कुनै रहस्य हुन सक्छ। यसलाई छुन सक्नुहुन्छ र बरफ र फलाम हृदय, जो, जाहिर छ, र त्यो अपेक्षा गर्न। नै यो पक्ष बाट त्यो बस छरिएका देखिन्छ, घमन्डी मानिस विचार गर्दैन। घरमा बसिरहेका, आराम, सारा महाराज, Hovers ल्याउँछ एक प्रेम एक को आगमन लागि सबै तयार। जसरी लामो Natalya साशा को सम्बन्ध मा सावधान हुन भयानक असीम आवश्यकता जगाए रूपमा। चासो छैन - sasha को कोचिंग काम लिन उनको सोधे। तपाईंले यो काम प्रेम छ। नतालिया आकर्षित गर्न थाले, र त्यसपछि सेवा पाठ्यक्रम नङ गयो। सामना गरौं, सबैले यो गर्न चाहन्छ।
म विवाह गर्न चाहन्छु, म विवाह गर्न चाहनुहुन्छ ...
भुइँमा सेतो पोशाक, एक पर्दा यो हुनुपर्छ रूपमा, लगाउन सपना। थप घनिष्ठ, छैन निमन्त्रणा गर्नुहोस्। पनि फोटोग्राफर आवश्यक छैन। र त्यसपछि, इवान Ohlobystina को पत्नी, धेरै बच्चाहरु छ। निस्सन्देह, Zhulin जस्ता एक प्रसिद्ध व्यक्ति कुरा, म धेरै हिंड्न र नतालिया डाह bit। र आकर्षित Rulin आफ्नो हास्य र आफ्नो प्राकृतिक नम्रता छ। यस्तो मानिस म जीवन बिताउन चाहन्छु।
नयाँ जीवनको लागि आशा
नतालिया एक प्रेम एक देखि एक बच्चा राखेका छ भन्ने समाचार आयो। तर, कुनै विश्वसनीय जानकारी। शायद त्यो आफ्नो न्यायसंगत पत्नी हुनेछ। विशेष गरी Zhulin यसको व्यापार admires, तपाईं घर फर्कन चाहनुहुन्छ त्यसैले, एक आरामदायक र न्यानो वातावरण सिर्जना गर्न सक्ने क्षमता। उनको भाग मा, Zhulin मात्र साँचो प्रशंसा, ब्याज आफ्नो जीवन, आवेग मा, अन्तमा देख्नुहुन्छ। तातियाना Navka नतालिया सम्बन्ध समर्थित छैन, तर यो अक्सर आफ्नो छोरी साशा भ्रमण गर्न Zhulin आउँछ। त्यो मैत्री नतालिया पर्छ। तर मा 2013, तिनीहरूले थियो एक छोरी Katya।
र त यो स्थायी आनन्द नतालिया Mikhailova को आशा जीवित। जीवनी व्यक्तिगत र सामाजिक दुवै मा जा।
Hattori Hanzo सामुराई तरवार
अभिनेत्री मेरिना Vaynbrand: जीवनी, व्यक्तिगत जीवन। सबैभन्दा चलचित्र र टिभी श्रृंखला
अभिनेत्री Lyudmila Nilskaya: जीवनी, फिलिम क्यारियर र परिवार
"कुरूप" छोराछोरीलाई Demi Mur र Bryusa Uillisa
बच्चा को लागि किन्न के: को नवजात लागि पहिलो सहायता किरा को सूची
विसंगतिमा संरचना: प्रकार र सिद्धान्तहरू
किन चन्द्र उड छैन? उडानहरू को समापन लागि कारण
तिराने - अल्बानिया गरेको राजधानी। ठाँउहरु, जलवायु, समीक्षा
स्कटिश लेखक Ien Benks: जीवनी, रचनात्मकता र पुस्तकहरू
कढाई कस्ता छ: मूल प्रकार र अवधारणाहरू
सवारीसाधान ग्लास demister: वर्णन, प्रतिक्रिया। Windows को लागि defogger कसरी प्रयोग गर्ने?
कसरी क्यान्सर आफूलाई जोगाउन? क्यान्सर रोकथाम